LG G3 ကီးဘုတ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ Androidsis
Francisco Ruiz | | အန်းဒရွိုက် Recovery ကို, Android Root ပါ, Android application များ, LG
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား Android ဆိပ်ကမ်းများမှသီးသန့် application port များနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဤကိစ္စတွင် XDA ဖိုရမ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ LG G3 ကီးဘုတ် အဆင်ပြေဘို့ ported သည်အခြား terminal ကိုမော်ဒယ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် Android operating system နှင့်အတူတစ် ဦး ၌ရှိကြ၏ ဗားရှင်း ၄.၁ နှင့်အထက်.
ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းသည် system application ၏ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သောကြောင့် LG G3 ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကီးဘုတ်ကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုအရင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အမြစ်တွယ်နှင့်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုအတူ သင့်ရွေးချယ်မှု၏, စနစ်တကျ flashed နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့။
Recovery အမျိုးအစားနှင့်စပ်လျဉ်း။ TWRP, CWM သို့မဟုတ် Philipz Recovery သည်ကွဲပြားမှုမရှိပါ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်perfectlyုံအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ LG G3 ကီးဘုတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် ထိုအခါ Busy Box နှင့်၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှ updated ။
၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်မီ LG G3 ကီးဘုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၊ သင့်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုယ်တိုင်မှ system တစ်ခုလုံးကို backup မိတ္တူကူးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ nandroid backup ကိုသိမ်းဆည်းထားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကီးဘုတ်အားမပြုတ်မီချက်ချင်းပင်စနစ်ကိုပြည်နယ်သို့ပြန်ပို့နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသဟဇာတမဖြစ်သည့်ပြproblemsနာများဖြစ်ခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအယုံသွင်းခြင်းမပြုပါက LG G3 တရားဝင် keyboard port.
LG G3 မူရင်းကီးဘုတ်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
ပထမတစ်ခုမှာ keyboard zip ကိုဤ link တစ်ခုတည်းမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး terminal ထဲမှ memory အတွင်းသို့ကူးယူပါ။ ကျနော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode မှာ reboot နှင့်ဤမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာ:
LG G3 keyboard ၏ zip ကိုရွေးပြီး၎င်း၏တပ်ဆင်မှုကိုအတည်ပြုသည်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့် Android မှာ LG G3 ကီးဘုတ်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်သူကိုယ်တိုင်ကသူမှတ်ချက်ပေးသည် HTC One M8 တွင်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်XDA ၏မှတ်ချက်များတွင်မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးကိုအသုံးပြုသူများကထိုကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းရှိသုံးစွဲသူများကအတည်ပြုသည် Xperia Z1 နှင့် Z2 y Samsung Galaxy Note အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး.
ငါကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်၏ Android terminal ဖြစ်သော LG G2 တွင်စမ်းသပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်စီစဉ်သူအားလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။ ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ ဒီကီးဘုတ်အသစ်နှင့်ပတ်သက်။ ပထမ ဦး ဆုံးစှဲ LG G3 သည်အခြား Android များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » LG G3 ကီးဘုတ် (Root and Recovery အသုံးပြုသူများအတွက်သာ) ကူးယူပါ။
ဖိုင်၏ link ထက် ကျော်လွန်၍ xda တွင် thread ၏ link ကိုထည့်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်။ ပထမဆုံးရိုသေလေးစားမှုမရှိဘဲဒုတိယကိစ္စတွင်စာဖတ်သူသည်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုလိုသည့်အတိုင်းဖတ်လိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘာမှမရွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင် keyboard p cel lg ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။ xqbမှာ microphonedvoice x ပဲရှိတယ်။
Leticia Suarez အားပြန်ပြောပါ
ရေစိုခံ Moto G, သင်မယုံသနည်း